Vonjy Rano Vaky ho an-dRandrenja. - Madagascar Informations
Vonjy Rano Vaky ho an-dRandrenja.
17 novembre 2016 17 novembre 2016 Madagascar Informations Aucun commentaire
5 volana izao no tratry ny homamiadana eo amin’ny tsinay Randrenja na i Gerard tompony trano mpamokatra « Horizon » sady efa niara niasa akaiky tamin’ny «Scoop Digital » nandritry ny 8 taona.
Tao anatin’ny iray volana anefa dia niombo ny aretiny ary niasarotra ny fitsaboana ka sahirana ny fianakaviana. Manoloana izay indrindra dia misy ny fiaraha-mientana teo amin’ny mpiara misehatra eo amin’ny tontolon’ny sarimihetsika ho entina hanapina an-dRandrenja noho ny halafon’ny fitsaboana.
Tsy ny mpanao sary mihetsika irery no antsoina fa ny olon-drehetra mahalala tanana. Ho an’ireo olona izay maniry hanampy, inty ny nomerao ahafahana mandrotsaka vola : Airtel Money 033 06 000 50 ; M-vola 034 08 000 50.
← Marrakech à Antananarivo : Des débats et des décisions dans le sens de l’intérêt commun
Inauguration de la Rocade d’Andohatapenaka construit par CRBC →
FAA : tsy mahasahana ny isany mponina ireo trano fivoahana
18 mai 2017 Gasikara 0
Fitokonan’ny mpivarotry Behoririka
30 septembre 2016 Madagascar Informations 0
Tsy ampy ireo mpianatra mpitsabo eny Akatso indemnité de stage 1200Ar
24 juin 2017 Gasikara 0